Ko Toe: မင်းသမီးတစ်ပါး ... (သို့) မင်္ဂလာပါ မထက်ထက်မိုးဦး
မင်းသမီးတစ်ပါး ... (သို့) မင်္ဂလာပါ မထက်ထက်မိုးဦး
လယ်ထွန်သွားနွားမေ့ဆိုသလို .. ကိုတိုးတစ်ယောက် ညီတော် ကိုယ်တော်လေး မျိုးကျော်ထွန်းမှာလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းများမေ့သွား၍ အနီးနားက711 (ဆဲဗန်း(န) အလဲဗန်း(န)) ဆိုင်သို့ထပ်ပြေးရတယ်။ ဆိုင်ထဲဝင်ဝင်ချင်းတော့ မြန်မာလိုပြောသံတွေကြားနေရတယ်။ ထိုင်းမှာတော့ ဘယ်နေရာသွားသွား မြန်မာတွေ ချည်းပါပဲ။ ဒါနဲ့ ဆိုင်ထဲမှာ လိုချင်တဲ့ ဆပ်ပြာမှုန့်ထုပ်ကို လိုက်ရှာရင်း မထက်ထက်မိုးဦး နဲ့ အမှတ်မထင် တွေ့ခဲ့တယ်။ အူကြောင်ကြောင်နိုင်လှတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေးမှာ “ဒီအမျိုးသမီးကို ဘယ်နေရာမှာ မြင်ဖူးပါလိမ့်” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနောက်မှာတော့ မထက်ထက်မိုးဦး ဆိုတာသိသွားပါလေရဲ့ဗျာ။ “မထက်ထက်မိုးဦး နော် .. မင်္ဂလာပါ .. တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်” ဆိုပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကိုတိုးတစ်ယောက်ကတော့ အမျိုးသမီး အကြီးအငယ် နဲ့ မိတ်ဆက်တိုင်း မထင်ရင် မထင်သလို လက်ကိုင်နေကြ .. (အဲယောင်လို့) လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ အကျင့်ပါနေခြင်းပါ။ ထက်ထက်မိုးဦး ဆိုတဲ့ မင်းသမီးကို ပထမဦးဆုံး အပြင်မှာ စမြင်ဖူးခြင်းပါ။ မထက်ထက်မိုးဦးက လှတော့လှပါတယ် ဗျာ .. ဒါပေမယ့် ရွာက တောကလေးများ အုံးဆီမလိမ်းလို့ ဆံပင်တွေက သံချေးကိုက်နေတဲ့ အလား နီကြောင်ကြောင် ရွှေရောင်တွေဆိုးထားလေရဲ့။
ကဲပါလေ .. သူနဲ့ အာလာဘ သလာဘ လေးနည်းနည်းပြောဖြစ်ပေမယ့် .. နှုတ်ခမ်းမွေး မုတ်ဆိတ်မွေး ဘရဗျစ်နဲ့ အားကစားလုပ်ပြီး ပြန်လာခါစ ချွေးနံ့တွေတထောင်းထောင်းကြိုင်လှိုင်သင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုတော့ သူ့ရဲ့ ဓါတ်ရှင်ထဲက လူဆိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ မြင်မိပါလိမ့်မယ်။
သူရဲ့ အနုပညာကို အစဉ်လေးစားလျှက်
Posted by MYO HAN HTUN at 8:48 AM
Labels: Myanmar Actress, Myanmar Film, Myself
Ye Lwin Oo (WILLIAM) said...
ကိုတိုးရေ... C-Box လေး ဘာလေး လုပ်ပါလား။ ဒါမှကျွန်တော် ပေါက်တကရ တွေအော်လို့ရမှာ။ ကွိ...ကွိ...
March 13, 2007 at 12:50 PM
ရဲလွင်ဦး ရေ .. C-Box ထဲမှာ လာဆဲတာရှိလို့ ဖြုတ်လိုက်ရတယ် .. အော်ချင်ရင် Comment မှာ အော်ခဲ့လည်းရတယ် ..
ဘယ်သူက တို့ ကိုကြီးတိုးကို လာဆဲလဲကွ.. ကွ ကွ
You met HTET HTET MOE OO @ 7-ELEVEN on Soi ABAC? Wow....
One thing, I don't under stand why I cannot see BURMESE FONTS on your comment section. Can you repair it?
လူကြမ်းလေးပါ ... အား ... လူကြမ်းကြီးပါ :P
March 16, 2007 at 2:51 AM
Condo2အရှေ့က 711 မှာပါ ခင် ဗျ။ တစ်ခါတလေတော့လည်း မြင်ရတယ် .. Firefox Latest Version နဲ့ဆို မြန်မာစာလုံးများကို Comment Section မှာ မြင်ရဆိုပဲ။ ရဲလွင်ဦးရေ .. ဘရှင် အသစ်ကိုသာ အင်စတော လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါလား .. :)
မဆိုးပါဘူး .. လူကြမ်းလေးဖြစ်ဖြစ် .. လူကြမ်းကြီးဖြစ်ဖြစ် .. မင်းသမီးတွေကို ဆွဲလားရမ်းလား ဇာတ်ခန်း ရိုက်ရလည်း .. ဟီးဟီး ..
THU HNIN SEE said...
ငါ .. လွမ်းလို့ပါ .. ရမ်ခမ်ဟန် ရယ်
အကြွေး (သို့မဟုတ်) ဆယ်နှစ် .. ဆယ်နှစ် .. ဆယ်နှစ်
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် နှင့် ဆဲဗန်းအလဲဗန်း
သူ ... သိပါစေ
My Photo Gallery 9
သိလား ... သိလား
My Photo Gallery 8
အချစ်ရဲ့ အဆီအနှစ် အရသာ